© Medeshi News : Emirates and flydubai join forces, announce extensive partnership agreement
Emirates and flydubai (www.flydubai.com) today unveiled an extensive partnership which will see the two Dubai-based airlines join forces to offer customers unmatched travel options. (Somali translation included)
Both airlines will continue to be managed independently, but will leverage each other’s network to scale up their operations and accelerate growth.
Distributed by APO on behalf of flydubai.
Awoodaha isbiirsaday ee flydubai iyo Emirates, waxay ku dhawaaqayaan heshiis iskaashi
Faa’iidooyinka uu helaayo qofka rakaabka ah waxaa kamida 200 oo meelood oo diyaaradahayagu tagayaan, khibrad safar oo aan xad lahayn iyo dib uhabayn joogta ah oo lagu samaynaayo barnaamijyada rakaabka ah ee joogtada ah
DUBAI, UAE, 18 Luuly, 2017/ --
· Iskaashiga waxaa kamida heshiis ballaarinta ganacsiga wadaaga ah, hormarinta jadwalada iyo khaddka
· Faa’iidooyinka uu helaayo qofka rakaabka ah waxaa kamida 200 oo meelood oo diyaaradahayagu tagayaan, khibrad safar oo aan xad lahayn iyo dib uhabayn joogta ah oo lagu samaynaayo barnaamijyada rakaabka ah ee joogtada ah.
· Labada shirkad diyaaradoodba waxaa lookala maamulayaa si kala gaar ah.
Shirkaddaha diyaaradaha Emirates iyo flydubai (www.flydubai.com) waxay maanta ku dhawaaqayaan iskaashi balaaran kaasoo usahlaaya in labada shirkadood ee Dubail kuyaala inay awoodooda iskugu geeyaan sidii macaamiishoodu uhelilayeen dookh aan cid kale helikarin. Labada shirkadoodba waxaa loo maamulidoonaa si madax banaan, laakiin waxay isku darsanayaan khadadkooda si ay ubalaariyaan khadadkooda ayna kudardargaliyaan kobacooda.
Iskaashiga cusub wuu kawayn yahay shaqo wadaagis waxaana kamida iskaashi iskudhafan oo dhanka khadka diyaaradaha ah oo leh jadwal iskudhafan. Heshiiska cusub wuxuu macaamiisha Flydunai ufurayaa khadad aan xdidnayn ee shirkada Emirates dhamaan daafaha aduunkoo dhan ee lixda qaaradood. Macaamiisha Emirates, waxaa ufurmaaya khadadka aadka uxoogan ee flydubai kuleedahay gobalka.
Labada shirkadda diyaaradeed waxay sidoo kale sii kobcinayaan dhaqdhaqaaqooda ganacsi ee garoon Diyaaradaha caalamiga ah ee Dubai, ayagoo dib uhabaynaaya systemyadooda iyo dhaqdhaqaaqyadooda si ay uxaqiijiyaan khibrad socdaal oon xadlahayn ayagoo kashaqaynaaya ultra-modern airport; oo ah garoonka caalamiga ah ee maanta aduunka ugu mashquulka badan dhanka rakaabka.
Mudane Sheikh Ahmed Bin Saeed Al Makhtoum, Maamulaha ahna Madaxa Laanta Fulinta ee Shirkada Erimares Group iyo Maamulaha flydubai waxay dhaheen: "Tani waa kobac wayn oo farxad uleh Emirates, flydubai, iyo waaxda Socdaalka Hawada ee Dubai. Labada shirkadood ee diyaradeedba mid walba waxay si iskeed oo guul ah ugu kobacday mudo sanado ah, heshiiskaana wuxuu fududaynayaa qiimaha wayn taasoo xirfadaha iskudhafka ah ee labada shirkadoodi uu usamaynaayo macaamiisha, shirkadkad kasta oo diyaaradeed, iyo Dubai ba."
Diyaarada Emirates waxay maanta leedahay diyaarada xajmiga balaaran ee laanta 259 ee diyaaradeed, taasoo duusha 157 meelood (ayna kujiraa 16 duulimaad oo alaabta kaliya qaada). flydubai waxay kushaqaysaa diyaarada cusub ee Boeing 737 oo uduusha 95 meelood. Khadka hada ee layskudhafay wuxuu kakoobanyahay 216 meelood oo duulimaadyo cajiib ah ay kutagayaan.
Iskaashigu wuxuu kashaqaynayaa inuu isku jaangooyo khadadka iyo jadwalada labada diyaaradoodba, si loo furo qayb cusub xiriiro cusub kuwaasoo macaamiisha siinaaya dookhyo intii hore kabadan. Intaas waxaa siidheer, tani waxay labada shirkadoodba kacaawinaysaa inay rakaab badan isa siiyaan midba mida kale. Marka lagaaro 2022, Khadadka lays ku daray ee Emirates iyo flydubai wxaa la filayaa inay duulimaadyo u sameeyaan 240 meelood, taa soo ay qaadayso laanta diyaaradeed ee iskudhafan 380.
Kooxaha Emirates iyo flydubai waxay si wada jir ah uga wada shaqaynayaan dhowr arrimood oo la xariira dib u habaynta ganacsi, qorshaynta khadka, hawlaha garoonka, socdaalka macmiilka, iyo barnaamijyada joogtada ah ee rakaabka.
Iskaashiga waxaa lokobcinayaa bilaha soosocda, ayadoo lagu bilaabaayo heshiiskii koobaad ee shaqo wadaaga hormarsan laga bilaabo rubuca danbe ee sanadka 2017. Macluumaadka dheeriga ah waxaa lasheegi doonaa markay diyaar noqdaan.
Ayadoo si buuxda uu uleeyahay Isbahaysiga Maalgashiga ee Dubai (ICD) Emirates iyo Flyduba labadaba waxaa si madax banaan umaamula madaxdeeda waxayna leeyihiin midkasta koox maamul oo gaar u ah.
APO qaybiyey oo ku hadlaya magaca flydubai.
Xaruntayadamacluumaadka waxay kakoobantahay dhamaan macluumaadka ganacsigayaga, ayna kamid yihiin war saxaafadeedyada iyo qoraalada iyo macluumaadka kusaabsan meelaha lagala xariiro shirkada.
Sheekada Emirates waxay soo bilaabatay 1985 markaas oo hala hayaga ku biloownay kaliya labo diyaaradood. Maanta, waxaa leenahay diyaaradaha caalamka ugu ballaaran ee A380s iyo Boeing 777s, anagoo siina macaamiishayada raaxada diyaarad ballaaran oo ah noocii ugu danbeeyay oo ugu haboonaa taasoo hawada marta.
Waxaan dhiirinaa socdaalayaasha daafaha caalamka oona kudhiirino khadadkayaga duulimaad ee sii kordhaaya, duulimaadyada aduunka ugu horeeya ee madadaalada leh, cunto dhadhan macaan iyo adeega heerka koobaad. Ka aqriso macluumaad dheeri ah.
Shirkadda fadhigeedu yahay Dubai ee flydubai waxay kudadaalaysaa inay dadka kahaqabtirto caqabadaha socdaal ayna kor uqaado isu socodka dadyawga dhaqamada kala duwan ee kukala nool khadadkeeda diyaaradeed ee siikoraaya. Lagasoo bilaabo markay markay hawlaheeda bilowday 2009, flydubai waxay leedahay:
· Waxay abuurtay khad duulimaad oo aada in kabadan 90 meelood oo kamida 44 dal.
· Waxay furtay 63 duulimaad oo aysan jirin shirkadda diyaaradeed oo horay ugu xiri jirtay Dubai ama meelo aysan kashaqaynin socdaalka Qaran ee UAE ee Dubai kabaxa.
· Waxay kushaqaysaa diyaarada halka khad ee 58 Next Generation Boeing 737-800 waxayna keeni doontaa inkabadan 100 diyaaradood dhamaadka sanadka 2023.
· Intaas waxaa sii dheer, hawlkarnimada iyo dabacsanaanta flydubai ayadoo ah shirkadda da' yar ayaa kor uqaaday kobaca dhaqaalaha Dubai, ayadoo lashaqaynaysa Dawlada Higsiga Dubai, ayadoo abuuraysa qulqul ganacsi iyo dalxiis oo ka imaanaaya meelo aan horay adeeg loogayn.
Si aad u hesho wararka ugu danbeeyay ee flydubai, Fadlan booqo Bogayaga wararka.
Image: Awoodaha isbiirsaday ee flydubai iyo Emirates, waxay ku dhawaaqayaan heshiis iskaashi (1)
Image: Awoodaha isbiirsaday ee flydubai iyo Emirates, waxay ku dhawaaqayaan heshiis iskaashi (2)
To unsubscribe from APO news releases please click here.